China UV Flatbed Printer C + W + Varnish UV Printer maka ikpe ekwentị, Glass, Cylinder Bottle Multi-layer Printing manufacturers na suppliers | Maishengli
1. Ink dị mma bụ isi ihe dị na nchekwa
Nke abuo, a na-ahazi ngwa nbipute UV iji chekwaa ọnọdụ
Mgbe etinyere ink katrij maka oge mbụ, UV flatbed ebi kwesịrị ịtọ ka ịzọpụta mode. Onu ogugu inkjet inks nke enwere ike ibiputa site na otu katrij ink. Ọ dabere na usoro inkjet ahọpụtara maka ojiji mbụ. Ọ bụrụ na ebu ụzọ tinye katrij ink dee UV, a na-ahọrọ ọnọdụ foto. Ya mere, ọbụlagodi na ebipụtara foto ole na ole, mmemme ahụ ka kwesịrị ịgbakọ ntakịrị ink karịa; ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na-azọpụta mode na mmalite, ihe omume nwere ike gbakọọ a otutu obere ink oriri na ka na-egosi na e nwere ihe ink mgbe ink na-fọrọ nke nta iwesa. ọnụego ahụ.
Atọ, họrọ usoro inkjet nke ọma
Uv flatbed printer emebela ọtụtụ usoro obibi akwụkwọ dịka ihe achọrọ iji bipụta ya, na ọnụ ọgụgụ ink na-ehichapụ maka ụzọ obibi akwụkwọ dị iche. Ọ bụrụ na ị na-ebipụta akwụkwọ izugbe, ọ na-atụ aro ka ịhọrọ “usoro obibi akwụkwọ echekwa”. Usoro a nwere ike ịchekwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ink ahụ ma bulie ọsọ obibi akwụkwọ nke ukwuu. Ọ gwụla ma ịchọrọ kpọmkwem ibipụta akwụkwọ ziri ezi, ị ga-ahọrọ usoro mbipụta ziri ezi.
Nke anọ, igbochi ájá mgbe niile na ihicha ihe dị mkpa
Mmezi nke UV flatbed ngwa nbipute dị ezigbo mkpa. Mgbe ọrụ UV na-arụ ọrụ arụchara ọrụ, a ga-ehichapụ ihu na ime nke UV na-ebipụta akwụkwọ, na mgbe anaghị eji UV na-ebipụta akwụkwọ ebi ogologo oge, ekwesịrị itinye UV inkjet n'ime ụlọ akọrọ na-enweghị ntụ , na usoro nchedo anyanwụ kwesịrị ịme.
Black isi awọ + ọkara ntụ ntụ
UV ink - acha anụnụ anụnụ - odo • uhie ・ ojii ・ acha anụnụ anụnụ - acha ọbara ọbara - ọcha • varnish
TIFF / JPG / EPS / PDF / BMP, wdg
Efere ọla, iko, seramiiki, osisi osisi, akwa, plastic, acrylic, wdg
Ogologo / obosara / elu: 3550mm / 2150mm / 1720mm
Ogologo / obosara / elu: 3368mm / 1900mm / 1475mm
Otu esi eme ka ebipụta UV dupute mma
1. Nrụ ọrụ iji UV ebi akwụkwọ bụ otu n'ime ihe ndị na - emetụta mmetụta obibi akwụkwọ ozugbo, yabụ ndị na - ahụ maka ọrụ ga - enwetakwu ọzụzụ ndị ọkachamara ka ịmalite, ka enwere ike bipụta ngwaahịa dị elu. Mgbe ndị ahịa zụrụ ndị na-ebi akwụkwọ mbadamba UV, ha nwere ike ịjụ ndị nrụpụta ka ha nye ntuziaka ọzụzụ ọrụ aka na usoro ndozi igwe.
2. mkpuchi ọgwụgwọ Nkebi nke e biri ebi mkpa ka a kwadebere na a pụrụ iche mkpuchi ibipụta ụkpụrụ n'ụzọ zuru okè n'elu nke ihe. Ọgwụgwọ mkpuchi dị ezigbo mkpa. Isi ihe mbụ aghaghị ịbụ otu, nke mere na mkpuchi ahụ nwere ike ịdị n'otu; nke abụọ bụ ịhọrọ mkpuchi kwesịrị ekwesị, nke na-enweghị ike ịgwakọta. Ka ọ dị ugbu a, a na-ekezi ihe mkpuchi ahụ na mkpuchi na-ehichapụ aka na ịgba.
3. UV ink UV flatbed ebi akwụkwọ mkpa iji pụrụ iche UV ink, nke a na-erekarị site Nsukka. Ogo nke ink UV ga-emetụta mmetụta obibi akwụkwọ ozugbo, a ga-ahọrọkwa inks dị iche iche maka igwe nwere nozzles dị iche iche. Ọ kachasị mma ịzụta site n'aka onye nrụpụta ma ọ bụ jiri ink dee nke onye nrụpụta kwadoro. N'ihi na ndị na-emepụta ihe na ndị na-emepụta ink UV emeela mgbanwe dị iche iche, enwere inks dabara maka ọnụ ahụ;
4. Ihe a ga-ebipụta Nghọta nke onye ọrụ banyere ihe a ga-emetụtakwa mmetụta obibi akwụkwọ. Ink UV n'onwe ya ga-emeghachi omume na ihe obibi akwụkwọ ma banye n'ime pasent ụfọdụ. Ihe dị iche iche nwere ogo dị iche iche nke ịbanye, yabụ ịmara onye ọrụ ahụ na ihe obibi akwụkwọ ga-emetụta mmetụta mbipụta ikpeazụ. Ohaneze, ọla, iko, seramiiki, mbadamba osisi na ihe ndị ọzọ nwere nnukwu ume; ink siri ike ịbanye; ya mere, a ghaghị iji mkpuchi na-emeso ya
Nke ise, ihe ndị nwere foto ahụ mgbe UV na-ebipụta akwụkwọ enweghị nsogbu ọ bụla, ọ dị mkpa ịtụle ma ọ bụ ihe kpatara eserese ahụ n'onwe ya, ọ bụrụ na eserese n'onwe ya nwere pikselụ nkịtị, yabụ na ọ gaghị enwe ezigbo mbipụta akwụkwọ. . Ọbụna ma ọ bụrụ na foto a nụchara anụcha, ọ na-apụghị nweta elu àgwà ebipụta na-arụpụta
Nke gara aga: High Quality 3D Digital Inkjet UV Flatbed Printer Jade Industrial Printing Machine
Osote: rotary UV flatbed karama ngwa nbipute igwe
Kedu ihe ndị nwere ike ibipụta UV na ya?
Ọ nwere ike ibipute ihe niile dị iche iche, dị ka ekwentị ikpe, akpụkpọ anụ, osisi, plastic, acrylic, pen, golf golf, metal, seramiiki, iko, akwa na akwa wdg.
Nwere ike ikanam UV ngwa nbipute ebipụta embossing 3D mmetụta?
Ee, ọ nwere ike ibipụta embossing 3D mmetụta, kpọtụrụ anyị maka ịmatakwu ihe ọmụma na mbipụta vidiyo.
Ọ ga-agbarịrị pre-mkpuchi?
Materialfọdụ ihe chọrọ icho mkpuchi, dị ka ọla, iko, wdg.
Kedụ ka anyị ga - esi bido iji igwe obibi akwụkwọ?
Anyị ga-eziga akwụkwọ ntuziaka na nkuzi vidiyo na ngwugwu nke ngwa nbipute.
Tupu i jiri igwe, biko gụọ akwụkwọ ntuziaka ahụ ma lelee vidiyo nkuzi ma rụọ ọrụ dịka ntuziaka.
Anyị ga-enyekwa ọrụ dị mma site na ịnye nkwado ntanetị n'ịntanetị n'efu.
Kedu maka akwụkwọ ikike?
Anyị factory enye otu afọ akwụkwọ ikike, ma e wezụga ebipụta isi, ink mgbapụta na ink cartridges.
Kedu ụgwọ obibi akwụkwọ?
Emekarị, 1 square mita mkpa na-eri ihe $ 1. Printing na-eri bụ nnọọ ala.
Kedụ ka m ga - esi dozie ogo nke ebipụta? ogologo ole ka ibipute max?
Ọ nwere ike ibipute max 100mm elu ngwaahịa, bipụta elu nwere ike gbanwee site software!
Ebee ka m nwere ike ịzụta akụkụ ahụ mapụtara na inks?
Anyị factory na-enye akụkụ ahụ mapụtara na inks, ị nwere ike ịzụta si anyị factory ozugbo ma ọ bụ ndị ọzọ na-eweta na mpaghara gị ahịa.
Gịnị banyere mmezi nke ngwa nbipute?
Banyere mmezi, anyị na-atụ aro ka ike na ngwa nbipute otu ugboro n'ụbọchị.
Ọ bụrụ na ị naghị eji nbipute ihe karịrị 3 ụbọchị, biko hichaa ebipụta isi na ihicha mmiri mmiri na-etinye na-echebe cartridges na ngwa nbipute (echebe cartridges na-akpan iji chebe ebipụta isi)
Akwụkwọ ikike:Ọnwa iri na abụọ. Mgbe akwụkwọ ikike ahụ gwụchara, ndị ọrụ nyocha ka na-enye. N'ihi ya, anyị na-enye ndụ niile aftersale ọrụ.
Bipute ọrụ: Anyị nwere ike ịnye gị nnwale n'efu na ibipụta akwụkwọ ntanetị n'efu.
Ọrụ ọzụzụ: Anyị na-enye ọzụzụ ụbọchị 3-5 anaghị akwụ ụgwọ na ebe obibi n'efu na ụlọ ọrụ anyị, gụnyere otu esi eji sọftụwia, etu esi arụ ọrụ igwe, otu esi edobe ya kwa ụbọchị, yana teknụzụ obibi akwụkwọ bara uru, wdg.
Ọrụ nwụnye:Nkwado na ntanetị maka nrụnye na ịrụ ọrụ. Nwere ike ikwurịta ọrụ na ndozi na teknụzụ anyị n'ịntanetị ọrụ nkwado site na Skype, Anyị na-akparịta ụka wdg. Njikwa ntanetị na nkwado saịtị ga-eweta mgbe a rịọrọ.
ngwa nbipute ink karama plastic cylinder flatbed UV ...
High Quality 3D Digital inkjet UV Flatbed Bipute ...
UV Printer Digital 8 Agba Digital UV F ...